Niutech @ 2018 Munich IFAT - China NIutech Tontolo_iainana
Ny faha-20 Iraisam-pirenena Fair ho an'ny Tontolo Iainana Protection (IFAT) tany Munich, dia grandly natao tao amin'ny New International Expo Center ao Munich avy any May 14 ny May 18, 2018. The Munich Expo Niorina tamin'ny 1966, izao tontolo izao indrindra matihanina ara-barotra ara-drariny ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana . Amin'ny maha iray amin'ireo fampirantiana iraisam-pirenena lehibe voamarina ny UFI, dia mitarika ny fironana farany ny iraisam-pirenena orinasa sy ny fiarovana ny tontolo iainana dia fantatra ho toy ny mpanondro manerantany.
IFAT soa aman-tsara, tsy nisy natao ho an'ny fotoam-pivoriana 19 ary ny lehibe indrindra sy manan-danja indrindra ara-barotra ara-drariny ho an'ny orinasa ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny dimy andro fampirantiana mandrakotra faritra iray ny 260.000 metatra toradroa. Tsy manana 18 goavana efitrano fampirantiana sy telo faritra ivelan'ny trano fampirantiana. Efa niara-nitondra exhibitors 3.304 avy amin'ny firenena 59, ary nahasarika mihoatra ny 135.000 eran-matihanina mpitsidika avy amin'ny firenena 168 mba hitsidika sy hifampiraharaha.
IFAT Expo foana no heverina ho manan-danja ao an-toerana fahafahana ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana ny orinasa hiditra amin'ny tsena iraisam-pirenena. Maro fanta-daza ao an-toerana sy avy any ivelany fiarovana ny tontolo iainana ny orinasa no hahazoany anjara amin'izao Expo izao tontolo izao ary naneho ny mpitarika teknolojia fiarovana ny tontolo iainana. Niutech Environment Technology Corporation (izay voambara antsoina hoe "Nituech") iraisam-pirenena dia mitondra fitaovana teknolojia pyrolysis nitarika ho IFAT. Ary tsy vitan'ny hoe manantena ny hanitatra ny iraisam-pirenena raharaha amin'ny alalan'ny io midadasika varotra sehatra, fa koa manolotra izao tontolo izao mba hijery ny fiakaran'ny Shina fiarovana ny tontolo iainana ny orinasa, koa, mba hihazona izany fahafahana hitarika fifanakalozan-kevitra sy ny fifanakalozana amin'ny sangany ho tranony avy amin'izao tontolo izao, ary mba hanehoana amin'izao tontolo izao ny fomba fanoratra sy ny tanjaky ny tontolo iainana ao Shina fitantanana orinasa amin'ny rehetra-manodidina, maro lenta, no malalaka-miainga fomba.
Shina hampahafantatra ny Vondrona Eoropeana tamin'ny taona sy Alemaina TUV. Ny teknolojia sy ny fitaovana azo ampiharina amin'ny isan-karazany ny fampiharana, ary azo ampiasaina any amin'ny fanodinana ny avo-molekiolan'ny polymers toy ny fako kodiarana, fako plastika, solika sludge, isan-karazany ny fako menaka, residual menaka, simika efitra, mafy fako , ary ny biomass. Fitaovana io no naondrana tany Alemaina, Brezila, Hongria, Estonia, India, Thailandy, Malezia, Irak, Taiwan sy ny firenena hafa sy ny faritra, efa nandresy fiderana niarahana niombon-kevitra avy amin'ny mpanjifa.
Miaraka amin'ny fiposahan'ny Shina ilain'ny fitantanana ny tontolo iainana, ny fangatahana ho an'ny tontolo iainana ao an-toerana ny teknolojia eo amin'ny fifanakalozana sy any ivelany mbola hitsangana. Toy ny fototry ny Eoropa, Alemaina dia iray amin'ireo lehibe indrindra eran-barotra foibe indrindra fa ny tian'ny sehatra ho an'ny orinasa Shinoa mba haneho ny vokatra sy ny teknolojia mivantana amin'izao tontolo izao. Amin'ny maha-orinasa Shinoa, Niutech tsy vitan'ny hoe mampiseho ny orinasa ny marika ara-teknika hery sy ambaratonga, nefa koa mampiseho ny herin'ny Shina fiarovana ny tontolo iainana ny orinasa. Niutech koa hanokana ny fanoloran-tenany ho ny tsena iraisam-pirenena fa ataovy ambony iray maneran-tany ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny tontolo iainana mpanamboatra fitaovana fitsaboana teknolojia mpanome tolotra.
Post fotoana: Jul-11-2018